Dr. Anisa oo Madax Ka Noqotay Cisbitalkii Lagu Daweeyay Yaraanteedii
Dr. Anisa Ibrahim waa dhaqtarad ku taqasusay caafimaadka carruurta, dhowaan ayaana loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee Xarunta Caafimaadka Harborview ee magaalada Seattle ee gobolka Washington, xaruntaas oo ahayd mid markii ay yareyd lagu daweyn jiray.
Dr. Anisa waxa ay dalka maraykanka timid iyadoo la socota qoyskeeda sanadkii 1993-dii ka dib markii qaxooti ahaan looga soo qaaday xeradii Otanga ee dalka Kenya. Tan iyo xilligaana waxay ku nooshahay magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Cel celis ahaan 600-700 oo carruur ah ayaa xarunta ay madaxda ka tahay Dr. Anisa daweyn caafimaad loogu fidiyaa, kuwaasoo ugu yaraan in ka badan 200 ay iyadu daweyso
Dr. Anisa waa hooyo leh laba carruur ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay waxbarashada jaamacadeed ee xagga caafimaadka, waxayna barnaamijka kaga sheekeyneysaa wixii ku dhaliyay inay dhaqtar noqoto, sida ay u aragto in loo magacaabo inay madax ka noqoto qaybta carruuta ee Xarunta Caafimaadka ee Harborviewe ee iyada oo yar lagu daweeyay, cidda ku dhiiragalisay inay gaarto yoolka ay hiigsaneysay, caqabadaha ay la kulantay, iyo sida ay hadda isu aragto.
Dhageyso wareysiga Dr. Anisa oo ay la yeelatay Caasho Ibrahim (Caasho cuud).
Dhageyso Wareysiga Dr. Anisa Ibrahim